၂၀၁၂ ငပလီ သင်္ကြန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » ၂၀၁၂ ငပလီ သင်္ကြန်
၂၀၁၂ ငပလီ သင်္ကြန်
Posted by ကထူးဆန်း on Mar 23, 2012 in Local Guides, Travel |9comments
သူငယ်ချင်း ကိုပေရေ .
မင်းတို့မိသားစု သင်္ကြန် မြန်မာပြည်ပြန်လာ လည်မယ်။ ငပလီမှာ သွားနေချင်တယ် ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်ကွာ။ သင်္ကြန် package လေးတွေ မင်းစုံစမ်းပေးပါဆိုတာနဲ့ ငါလည်း ဘာဘဲလိုလို ရန်ကုန်လမ်းညွှန်ရှိတယ် ဆိုတာ မေ့ပြီ အင်တာမဲ ကြီးကနေဘဲ ခေတ်မီမီ ၀င်ရှာလိုက်တယ် သူငယ်ချင်းရေ။
မင်းကြည့်လို့ ရအောင်လည်း ဒီမှာလိပ်စာလေး တင်ပေးလိုက်တယ်ကွာ။ ဒီလိပ်စာကတော့ ငပလီက ဟိုတယ်တွေကို တည်းသွားတဲ့ ခရီးသည်များက ကြိုက်ရင် ကြိုက်တယ် မကြိုက်ရင် မကြိုက်ဘူးဆိုတာတွေ ရေးထားတာပေါ့ကွာ.
သူငယ်ချင်းရေ ။ အဲ့ဒီ့မှာ စိတ်ဝင်စားစရာ တစ်ခု သွားတွေ့တယ်။Travelers’ Choice® 2012 Winner ဆိုတာလေး ။ ဒါကတော့ မင်းကိုငါပြောပြဘူးတဲ့ နိုင်ငံခြားကနေ တရားဝင် လိမ်ပေးတဲ့ ဆုမဟုတ်ဘူး ဆိုတာလေး နဲ့ အဲ့ဒီ့အကြောင်းတော့ နောက်မှပြောပြမယ်နော်။
အဲ့ဒီကနေမှ ဟိုတယ် နံမည်တွေ ကူးပြီး သူတို့ ၀က် စာမျက်နှာ ထဲဝင်ရောက်ရှာဖွေ ကြည့်လိုက်တယ် သူငယ်ချင်းရေ ။ ငါတို့မြန်မာပြည်က ဟိုတယ်သမားများ ၀က် စာမျက်နှာတွေကို အားကိုးကြလား၊ ဘာတွေ ဖော်ပြထားလဲ။ သင်္ကြန်နား နီးပြီဆိုတော့ သင်္ကြန် နဲ့ ပါတ်သက်ပြီးများ package တွေ ကြော်ငြာထား မလားလို့ပေါ့ သူငယ်ချင်းရေ။
Trip Advisor မှာ ပါတဲ့ အစဉ်အတိုင်းဘဲ မင်းကိုပြန်ပြောပြမယ်နော်။ ငါက ၀က် ပညာရှင်မဟုတ်လို့ သူတို့ရဲ့ ၀က် စာမျက်နှာတွေ နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး မဝေဖန်ဘူးနော်။ ငါတို့ လိုရင်းဖြစ်တဲ့ သင်္ကြန် နဲ့ ပါတ်သက်တာ ဘဲ ပြောမယ်နော် ။
၁။ Amazing Ngapali Resort
သူငယ်ချင်းရေ .. သူက ထောက်ခံသူ အများဆုံးနဲ့ နံပါတ်တစ် နေရာ ယူထားတဲ့ ဟိုတယ်ပေါ့ကွာ ။ သူ့ web site address က http://www.amazingngapaliresort.com/ နဲ့ သူတို့ ရန်ကုန် ရုံးရဲ့ web site www.amazing-hotel.com ကနေလည်း ၀င်ကြည့်လို့ ရတယ်လေ။
အဲ့ဒီမှာ သင်္ကြန် package ကြော်ငြာထားတာ တွေ့တယ် သူငယ်ချင်းရေ ။ ဒါက မင်းကြည့် လို့ ရအောင် စာမျက်နှာလေးပါ။
http://www.amazing-hotel.com/Thingyan2011.html ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး ဖော်ပြပေးထားတာတွေ့ ရတယ် သူငယ်ချင်းရေ။
သူတို့ တကယ်အလုပ် လုပ်မလဲ သိချင်လို့ ငါ ဖုန်းမဆက်ဘဲ e-mail ပို့ပြီးတော့လည်း စုံစမ်းလိုက်တယ် သူငယ်ချင်း ။
ငါ့ နေ့လည် ၁း၁၂ နာရီမှာ ပို့လိုက်တဲ့စာက ပြန်စာ အဲ့ဒီ့နေ့ဘဲ ၂း၁၂ မှာ ပြန်ရတယ် သူငယ်ချင်း ။ အတော် လေးမြန်တယ် လို့ ချီးကျုးရမယ်။ ပြီး ငါမေးထားတာတွေကိုလည်း တိတိကျကျပြန်ဖြေတာ တွေ့ရတယ် ။ အင်း ၀န်ထမ်းကောင်း တွေကြောင့် မျက်နှာလှ တယ် ပြောရမယ်ထင်တယ် သူငယ်ချင်းရေ။
သူငယ်ချင်း ၀င်ကြည့်ရမှာ ပျင်းရင်လည်း အလွယ်တစ်ကူ မင်းသိအောင် ငါ့ဆီပြန်လာတဲ့ e-mail ကနေပြန်ကူးပေးလိုက်တယ် သူငယ်ချင်း။ ငါက မင်းမြန်မာ နိုင်ငံသားဆိုပြီး မေးလိုက်တဲ့ အတွက်အောက်က နိုင်ငံသား အတွက် သာ ပါ ပါတယ် ။ ရန်ကုန်က နိုင်ငံခြားသား မင်းသူငယ်ချင်းအတွက် ဘယ်လောက်ကျလဲ သိချင်ရင်တော့ web site ထဲသာဝင်ကြည့် ခိုင်းလိုက်နော် သူငယ်ချင်း။
Amazing Thingyan Package . 1
From 10th to 13th April,4Days/3 Nights Package
Package price 299000Ks for one person.
Amazing Thingyan Package. 2
From 13th to 17th April,5 Days/4 Nights Package
Package price 450000Ks for one person.
Amazing Thingyan Package.3
From 17th to 19th April,3Days/2 Nights Package
Package price 235000Ks for one person.
Flights tickets for Yangon-Thandwe -Yangon
Hotel Accommodation in Deluxe Seaview Villa(Twin Sharing Room) of Amazing Ngapali Resort(*****)
Airport Transfers at Thandwe Airport
International/Traditioanl Daily Breakfast
Complimentary Hat & Sea Shell Necklace Written by Guest’s name
Welcome with Fresh Coconut Juice & Welcome Fruit Tray.
သြော် ..အေးကွ . အခန်းငါမေးတဲ့ နေ့အထိတော့ ရပါသေးတယ်တဲ့ ။ စုံစမ်းသူတွေများနေလို့တော့ အမြန်အကြောင်းပြန်ပါတဲ့ကွာ။
သူငယ်ချင်းရေ ငါ့ကို မမဲ့ဖို့ ကြိုပြောထားပါရစေ။ မင်းအကြောင်းသိပါတယ် ကွာ။ ဒါပေမဲ့ Trip Advisor ထဲက အတိုင်း ငါ ဘက်မလိုက်ဘဲ မင်းမကြိုက်လည်း အစဉ်လိုက်ရေးလိုက်မယ်နော် ။ ဒီလောက်ဆို ဘယ် ဟိုတယ် ဆိုတာမင်းသိမှာပါနော်။
၂။Aureum Palace Spa & Resort
အေးကွာ ။ ဟိုတယ်က ငပလီမှာ အကောင်းဆုံးဆိုတာ ၀န်ခံရမှာပါကွာ ။ ဒါပေမဲ့ တည်းသွားတဲ့ ဧည့်သည်ထောက်ခံမှု အရတော့ နံပါတ် နှစ်ဖြစ်နေတာပေါ့ကွာ.
သူ့ web address က www.aureumpalacehotel.com ။ http://www.aureumpalacehotel.com/ngapali-index.htm ပါ ။
ဟိုတယ်က သင်္ကြန်နဲ့ ပ်ါတ်သက်ပြီး ဘာမှ ကြော်ငြာထားတာ မရှိပါဘူး ။
ဒါနဲ့ ငါလည်း အီးမဲ ကြီး ပို့လိုက်တာပေါ့ကွာ။ မနေ့က နေ့လည် ၁း၁၅ နာရီက ပို့လိုက်တာ ဒီနေ့ ဒီစာရေးတဲ့ အချိန် ည ၉း၄၃ အထိဘာ ပြန်စာမှ မရခဲ့ပါဘူးကွာ။
သူ့ အကြောင်းသိချင်ရင်တော့ သူ့ web site သာဝင်ကြည့်တော့ သူငယ်ချင်း
၃။Thande Beach Hotel
သူကတော့ package အနေနဲ့ valentine တစ်ခုသာ ကြော်ငြာထားတာ တွေ့ပါတယ်။
ဒျါနဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အီးမဲ 1:13 pm မှာ လွှတ်လိုက်တော့ ဒုတိယ အမြန်ဆုံးအဖြစ် 2:35 pm မှာ ပြန်စာလက်ခံရရှိပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ သူကတော့ သင်္ကြန်တွင်း အခန်းပြည့်သွားပြီ ။ အခြားနေ့ လိုချင်ရင်တော့ မေးပါ ဆိုတာသာ ပါပြီး ဘာ သတင်းမှ မပါပါဘူး ။ package ၇ှိမရှိ ။ အခန်းခ ဘာမှ မပါ ပါဘူး။
သူငယ်ချင်းရေ။ သူက တစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းက ထိပ်ဆုံးမှာနေခဲ့တာပါ ။ အခုတော့ နံပါတ် ၄ ရောက်နေပြီး သူ့ web ကိုဖွင့်မရလို့ ဆက်သွယ်မရခဲ့လို့ ခြွင်းချက်ထားပေးပါကွာ။
၅.Bayview – the beach resort
သူလည်း သင်္ကြန် နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ကြော်ငြာထားတာ မရှိသလို အီးမဲကိုလည်း ပြန်စာမပို့ပါဘူး ။
၆။Amata Resort and Spa
သူကလည်း သင်္ကြန် အတွက် အထူးကြော်ငြာမရှိသလို အီးမဲကို 1:17 pm မှာ လွှတ်လိုက်တာ နောက်တစ်နေ့နံနက် ၉း၁၀ မှာ သင်္ကြန်တွင်းအတွက် အခန်းမရှိတော့ကြောင်းပြန်စာ ရရှိပါတယ် ။ သူကတော့ ၁၇ ရက်နေ့မှာ ဆို ရနိုင်ကြောင်းနဲ့ အခန်းခတွေ ထည့်ပေးလိုက်လို့ သူငယ်ချင်းသိရအောင် ကူးပေးလိုက်ပါတယ်။
Grand Cabana Sea Veiw … Ks. 300000 net per room night including breakfast
Cabana Cottage … Ks. 170000 net per room night including breakfast
Deluxe … Ks. 120000 net per room night including breakfast
Superior … Ks. 95000 net per room night including breakfast
extra bed … Ks. 40000 net per night including breakfast
၇။Amara Ocean Resort
သူလည်း သင်္ကြန် ကြော်ငြာထားတာ မရှိပါဘူး ။သူ့ web site က စာတွေက ဖတ်လို့ သိပ်မမြင်ရ လို့ ဆက်သွယ်မူ့မလုပ်ခဲ့ပါဘူး ။ http://www.amaragroup.net/ocean/ocean-en/
၈။Silver Beach Hotel
သူ့ ၀က်ဆိုဒ် ရှာလို့ မရခဲ့ပါဘူး။
၉။Ngapali Beach Hotel
ဒီ ဟိုတယ် သက်တမ်း က အခု ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဟိုတယ်တွေထဲမှာ သက်တမ်းအရှည်ဆုံးဟိုတယ်တစ်ခုပါ ။ တစ်ချိန်က ဟိုတယ် ခရီး ဟိုတယ်ဖြစ်ခဲ့ ပြီး အဲ့ဒီကနေ လုံမလေးဟိုတယ်၊ အနေနဲ့ ဒေသခံကြားနံမည်ကြီးခဲ့ပြီး အခုတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဦးတေဇ ၀ယ်ပြီး ပြင်ဆင်မှုလုပ်နေတယ်လို့ သိထားရတယ် သူငယ်ချင်းရေ။
၁၀။Royal Beach Motel
http://www.royalbeachngapali.com/ ဖြစ်ပြီး သူလည်း သင်္ကြန် နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ကြော်ငြာတာ မရှိသလို အီးမဲ ကိုပြန်လည် ဖြေဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။
သူငယ်ချင်းရေ တစ်ခြားဟိုတယ်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ် ။ ငါက အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို Trip Advisor ထဲက မင်းတို့လို နိုင်ငံခြားနေသူများ အလွယ်တကူ ရှာနိုင်မဲ့ဟိုတယ် သာတင်လိုက်တာပါ။
လေယာဉ်ခ ကတော့ ရန်ကုန်-သံတွဲ ကို ၆၅၀၀၀ ကျပ် ။ အသွား အပြန်ဆိုရင်တော့ ၁၃၀၀၀၀ ကျပ် ကျမှာပေါ့ကွာ ။ ဒီနှစ်လေယာဉ်လိုင်းတွေ တိုးနေလို့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလို Charter ယူပြီး ဈေးတင်ရောင်းတာ မရှိလောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကွာ ။ ကြော်ငြာတာလည်း မတွေ့မိသေးဘူးလေကွာ။
အခုလောက်ဆို ကိုယ်တို့ဆီက အလုပ်လုပ်ပုံလေး သူငယ်ချင်းသိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ် ။ ပြင်နေတဲ့ ဟိုတယ်တစ်လုံးထုတ်ပြီး ၉ လုံး မှာ တစ်လုံးသာ ကိုယ်သိချင်တာ သိခဲ့ရပါတယ်။
e-mail ၆ စောင်ပို့ခဲ့ရာမှာ နေ့မကူးဘဲပြန်တာ ဟိုတယ် နှစ်လုံးရှိခဲ့ပြီး နောက်နေ့မှ ပြန်တာ တစ်လုံးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းဆီက အကျင့်တွေဖျောက်ပြီး မြန်မာပြည်နဲ့ အလုပ်လုပ်ရင် စိတ်ရှည်ပါ ပြောတာပေါ့ကွာ ။ ဒါ ပမာဏ စုံစမ်းရုံဘဲရှိသေးတယ် ။ အသေးစိတ်ကျရင် ဘာတွေ ဘယ်လောက် လက်ပေါက်ကပ် ဦးမလဲ မသိသေးဘူး ။ ဘာဘဲပြောပြော အရင်ကထက်စာရင် တိုးတက်လာတယ် ဆိုပေမဲ့ တိုးတက်သင့် သလောက် မတိုးတက်တာက ပြဿနာပါ။
ကမ္ဘာလှည့်တွေ အများကြီး လာတော့မယ်ဆိုပြီး ဟိုတယ် ဈေးနုန်းတွေ တက်ပြီးရင်းတက်ဖို့တော့လုပ်နေပါပြီ။ ၀န်ဆောင်မှု့ အပိုင်းဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲ ဆိုတာလည်း ကပ်ပါလာဖို့ လိုအပ်နေသေးတာ အမှန်ပါဘဲ သူငယ်ချင်းရေ ။
အဲ့ဒီ့ အကြောင်းပြောရရင် ရှည်သွားမှာစိုးလို့ ဒီလောက်ဘဲပြောပါရစေတော့ သူငယ်ချင်းရေ။
စိတ်မပျက်ပါနဲ့ သူငယ်ချင်း ။ လာ သာ လာခဲ့ပါ ။ ငါ့ဆီက စာ ပြန်မရ ရင်လည်း စိတ်တွေ ဆိုးမနေနဲ့ဦးနော် … သိတယ် မဟုတ်လား ။ ကိုးနတ်ရှင်ပေါ်တည်မှီနေရတာတွေလည်း အများကြီးဆိုတော့ ။ မြန်မာပြည်နဲ့ အလုပ်လုပ်ရင် စိတ်ရှည်ပါ သူငယ်ချင်း ။
မြန်မာပြည်လည်လည်သွားမယ့်သူတွေ… လာလာမေးနေတာ.. အတော်ပဲ.. ဒီကိုညွှန်းလိုက်မယ်..။
မြန်မာတွေပါပဲ.. တချို့ကလူမျိုးခြားတွေပါ.. အဖေါ်ခေါ်.. ပြန်လည်ကြတယ်ပေါ့..
ဒီနေ့ ညနေမှာ ရေဒီယိုက အင်တာဗျူး သတင်းတစ်ပုဒ် အကြောင်း သိခဲ့တော့ ကထူးဆန်း ကို ပြေး သတိရ လိုက်တယ်။
မြန်မာပြည် က တံခါးဖွင့် လိုက်တာ ကို ဒီကလူ တွေ အတော်များများ သွားလည်ကြ ဆိုဘဲ။
သတင်းထောက် တွေ အတွက်လဲ သတင်းထောက် ဗီဇာ ထုတ် ပေးခဲ့တာ လွယ် ဆိုဘဲ။
အဲဒီ သတင်းထောက်ရဲ့ အပြောကတော့ မြန်မာပြည် က ဟိုတယ် အယုတ်အလတ်အမြတ် မရွေး အားလုံးပြည့် ကုန်ပြီ ဆိုဘဲ။
မြန်မာပြည်က ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတာဝန်ရှိသူ အမျိုးသမီး နဲ့ လဲအင်တာဗျူး တယ်။
အဲဒီမှာ တစ်ချို့ ဟိုတယ် တွေက ဆားဗစ်ကိစ္စ ကို လုံးဝ အလေးဂရုမထား ဘဲကို လက်ခံနေတော့ ရေရှည်မှာ ဆားဗစ် နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး နာမည်ပျက်မှာ စိုးတယ် လို့ ပြောခဲ့တယ် တဲ့။
နောက် အဲဒီ သတင်းထောက်က ချီးကျူးထားသေးတယ်။
မြန်မာပြည် ရုတ်တရက် ပြောင်းသွား၊ တံခါးပွင့် သွားတဲ့ နေရာမှာ တစ်ခြား နိုင်ငံ (အဓိက အာရပ်နိုင်ငံတွေ) လိုမဟုတ်ဘဲ အရမ်းကို ညင်သာ စွာ သွေးထွက်သံယို မရှိပြောင်းခဲ့လို့ တဲ့လေ။
သူပြောတာရှိသေးတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုံပါတဲ့ တီရှပ်တွေ အပါအဝင် တစ်ခြားပစ္စည်း တွေဟာ ရောင်းလို့ကို မလောက်ဘူးတဲ့။
နောက် သူက ရံပုံငွေအတွက် ရောင်းတဲ့ ပစ္စည်းဆိုင် တွေကိုသွားပြီးလဲ အင်တာဗျူးတယ်။
ဒီလို တီရှပ် တွေ ဘယ်လောက်ရောင်းရလဲ လို့။ ဒီနေ့ တီရှပ် တစ်ထောင် တင်ရောင်းတာ ပြိုက်ကနဲ ကုန်သွား ဆိုဘဲ။
ပြီးတော့ သူက ဆိုင်ရှင် သားအမိ ကို မေးသေးတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ် ကဆိုရင် ဒီလို တီရှပ်မျိုးတွေ ကို ရောင်းရဲလားလို့။
ဒီတော့ အမေက ဖြေတယ်။ “အဲဒီတုန်းက ဒီလိုရောင်းရင် ကျွန်မတို့ သားအမိ ထောင်ထဲ ဝင်နေရပြီပေါ့” တဲ့။ (မြန်မာလို ဖြေတာ)
သူ့ကြည့်ရတာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အတွက်ရောက်နေတာလား မသိဘူး။
မြန်မာပြည်ထဲကလူတွေ ထက်ကို ဒီပြင်ပက လူတွေက ရွေးကောက်ပွဲ ကို ပိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပုံရတယ်။
အင်းလေ – ဒါလဲ သူတို့ မီဒီယာ အလုပ်ဘဲကိုး။
ဒီလို ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာ အပြောင်းအလဲ တွေ မသိမသာ ကနေ သိသိသာသာကြီးဖြစ်ဖြစ် လာတာ ကိုတောင် ပုံစံမပြောင်း အရင်အတိုင်း အချိုးချိုး နေသူတွေ ဟာ မျက်စိတွေ၊ နားတွေ ကောင်းသေးရဲ့လား တွေးမိတယ်။ တနည်း အဲဒီလို သိဖို့ကို ဥာဏ်မမှီတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲဒီလို ဒီငတုံး တွေက ကိုယ့်ကိုအုပ်ချုပ်နေတယ် ဆိုတာကို တွေးလိုက်မိရင် အသဲနာလို့ မဆုံးဘူး။
အခြေအနေကတော့ တကဲ့ကို စိမ်ခေါ်ပွဲ ဖြစ်ဖြစ်လာပြီ။
ဧပြီ တစ်ရက် ကိုရောက်စေချင်လှပြီ။
ဒါထက် ကထူးဆန်း ရဲ့ ဟိုတယ် ဈေးတွေ က ကြီးလိုက်တာ။ ဒါတောင် လူအပြည့်တဲ့နော်။
တကယ် က တစ်ခြားအိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ က ဈေးတွေ နဲ့ ယှဉ်ရင် ပို ကြီးတာတော့အမှန်ဘဲ ထင်ရဲ့။
အမှန်က တကယ်တိုးရစ် တွေ အများကြီးရချင်ရင် ဆားဗစ်ကောင်းကောင်း ကို သင့်တော်တဲ့ ဈေးနှုန်း နဲ့ဘဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
တကယ်အများကြီး ဖြစ်လာရင်ရော အခုအချိန်မှာ နိုင်ပါ့မလား?
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က လန်ဒန် ခရီးသွားကွန်ဖရန့် မှာ မြန်မာပြည် က ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကလူတွေ လာတက်ပြီး လုပ်သွားကြသေးတယ်။
စီးပွါးရေး ပွင့်လင်းစတော့ပြု လာပါပြီ။ လိုက်နိုင်ဖို့ဘဲ လိုတယ်။
ကျွန်မတို့ ဒီလောက်မညံ့ကြပါဘူး မဟုတ်လား။
အရီးလတ်ရေ .. ကျွန်တော့် အမြင်ပြောရရင် ဧပြီလ တစ်ရက်နေ့ က စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာထက် အဲ့ဒီ အကျော်ရက်များပါ။ အစိုးရ က သူတို့ လိုချင်တာ ဖြစ်ဖို့ ၊ ၄၈ နေရာ ၊ အခုတော့ ကချင်ပြည်နယ်ထုတ်လိုက်လို့ ၄၅ နေရာကို NLD ကို မနိုင် ရင်တောင်မှ နိုင်အောင် လုပ်ပေးချင်နေမှာပါ ။ အခု လိုက်လုပ်နေတဲ့ အဖျက်တွေ ဆိုတာတော့ လူမြင်ကောင်းအောင် ဇတ်ရှိန်တက်အောင် လူကြမ်း ကြမ်းပြတဲ့ အနေနဲ့ဘဲ ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ် ။ နိုင်ငံတကာ စောင့်ကြည့် လိုသူများကိုလည်း ၀င်ခွင့်ပြု ဖိတ်ခေါ်နေတာ တွေ ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့ ကိုယ်နိုက် မဲလိမ်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိပါဘူး ။ ဒါကိုပြပြီး သူတို့လိုချင်တာတောင်းဖို့ ဆန်ရှင် အတတ်နိုင်ဆုံးရုတ်သိမ်းဖို့ လုပ်မှာပါ။ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ်ပေါ့နော်။
ဒီဟိုတယ်တွေ ဈေးကြီးတယ်ဆိုတာ ငပလီမို့လို့ပါ ။ အစိုးရမီး မရဘဲ ကိုယ်ပိုင်မီးစက်နဲ့ မီးပေးရတာလည်းပါပါတယ်။နောက်ပြီး ဒီဟိုတယ်တွေက Beach Front တွေလေ။ ထိုင်းမှာ ဒီလို beach front တွေဆိုလည်း ဈေး ကြီးပါတယ်။ (အဟိ.. Beach Front ဆိုလို့ နောက်ကြောတွေလည်း ရှိပါဘူး။ ဒါလေးဘဲရှိတာပါ) :grin:
ယခုအထိတော့မြန်မာပြည်လာလည်သူ ၉၀% လောက်ကတော့ ကျေနပ်ပြီးပြန်ကြပါတယ်။ ဒါတွေကလည်း တကယ်တော့ သူတို့ မလာခင်မှာ မြန်မာပြည်ကို လျှော့တွက်ထားတဲ့ အတွက်လည်းပါ ပါတယ် ။နောက် တစ်ခုရှိတာတော့ ကျွန်တော်တို့ တတွေက နိုင်ငံခြားသားဆိုရင် ကူညီချင် ဖော်ရွေတဲ့ စိတ်လေးတွေ ရှိနေသေးတော့ သူတို့ကျေနပ်ကြပါတယ်။ ဆိုးတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ အလာများလာတဲ့ တစ်နေ့ တွေ့လာတဲ့ နေ့များလာရင်လည်း အခုလိုဖော်ရွေမှု့ ကတော့ နဲလာတာလည်း ရှိမယ်၊သူတိုပေးရတဲ့ ဈေးနဲ့ သူတို့မျှော်လင့်တာတွေ ရမလာရင်တော့ တစ်မျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အခု ဧည့်သည်အ၀င်နဲ့ ရှိတဲ့ဟိုတယ်မလောက်တော့ ဈေးချဖို့နေနေသာသာ booking တောင် မနည်းလုပ်ရပါတယ်။
ရှေ့လျှောက် အိမ်သာရင် လာမည့် ဧည့်တွေ ၀င်လာမစဲ တသဲသဲ ချိတ်ထားစရာတောင်လိုမှာမဟုတ်တော့ဘူး။
ကိုယ့်ဖက်က အဆောက်အဦ နေရာထိုင်ခင်း အဆင်သင့် မဖြစ်သေးတောင် အမြန်လေ့ကျင့်လို့ရတဲ့ Human Resource လေးတွေတော့ သင်ကြားပေးကြဖို့လိုနေပါပြီ။
၀န်ဆောင်မှုမှာ လူက အရေးကြီးဆုံးလို့ ထင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်း အန်ကယ်ကြီး ထူးထူး ရေ
မောင်ပေ တစ်ယောက် အန်တီနု ရဲ့ အီဒီယံ ထဲကလို I’m broke ၊ ဘတ်ပြိုင် ဘိုင်ပြတ် နေပါတယ် ။
နောက်ပြီး မဒမ်ပေ တစ်ယောက် ၊ နိုင်ငံခြားကပြန်ရောက်နေကြတဲ့ သူ့ ဘော်ဒါတွေ နဲ့ သင်္ကြန်လည်ဖို့ စိုင်းပြင်းနေပါတယ် ။
မောင်ပေ့ ဆန္ဒအရ ဆိုရင် ငပလီမှာဘဲ အေးအေးလူလူ လာပျော်ပါးချင်တာပါ ။
အခုရက်ပိုင်းအတွင်း လေယာဉ်လက်မှတ်ခ စုံစမ်းကြည့်တော့ မန်းတလေး က နေ ငပလီ ကို တစ်ယောက် ၆သောင်းခွဲ ကျပ် ဆိုတာ သိရပါတယ် ။ ဆိုတော့က မောင်ပေ တို့ ၂ယောက် ဆိုရင် ၊ မန်းတလေးငပလီ အသွားအပြန် လေယာဉ်လက်မှတ်ခ ၂သိန်း၆သောင်းကျပ် ။
ဟိုတယ်မှာ အခန်းရခဲ့မယ်ဆိုရင် သုံးရက်အတွက် သုံးသိန်းကျပ် ။
ဟိုနားဒီနား သွားလာ စားသောက်စရိတ် ၂သိန်းကျပ် ။ အားလုံး ၉သိန်းလောက် ပါမှ ဖြစ်မှာပါ ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ၊ အခုလို သတိတစ်ရ နဲ့ ဟော်တယ်ဈေးနှုန်းတွေ ၊ ဝက်ဆိုက်လင့်ခ်တွေ နဲ့ ရေးတင်ပေးတဲ့ အတွက် ၊ သူငယ်ချင်း အန်ကယ်ကြီးဆန်းဆန်း ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း ကွန်မင့်ပါရစေနော ။
အန်တီရေ ရာနုန်းပြည့် မှန်ပါတယ် ။
:grin: :grin: ကိုပေ ငပလီသွားနေချင်တယ် မန့်ထားတာတွေ့တာနဲ့ စိတ်ကူးပေါက်ပြီးရေးဖြစ်သွားတာ.. ဒါကြောင့် ကိုပေ နံမည်တပ်ထားတာ ။
တကယ်တော့ ချောင်းသာမှာလဲ မဆန့်တော့ဘူး
ငပလီကို ဒါ့ထက်လေးငါးဆ လူလာနိုင်အောင် လုပ်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်။
ဟိုတယ်တွေ များများဆောက်လိုက်ရင် ဈေးသက်သာတဲ့ ဟိုတယ်တွေလဲ ရှိလာမှာပါ။
ကမ်းခြေနားက လူနေအိမ်တွေမှာလည်း တည်းလို့ရတယ်။
တစ်ရက်ကို ၃ သိန်းတဲ့။
(စတိုင်တွေ မလိုင်တွေတော့ မပါဘူးပေ့ါ။)
အဲဒီအိမ်မှာ နေတဲ့လူတွေက ထွက်သွားပေးပြီး
ဧည့်သည်တွေက အဲဒီမှာ နေပြီး ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားသောက်လို့လည်း ရတယ်။
လူများများစုသွားပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး ဒေသထွက် ပင်လယ်စာတွေကို ကိုယ်တိုင်ချက်စားချင်သူတွေအတွက်တော့ အဆင်ပြေတယ်။
ဖတ်စလတီအပြည့်နဲ့ နေချင်သူတွေအတွက်တော့ မပြေလောက်ဘူး။
ဦးထူးဆန်းကြီး ညွှန်းလို့ Amazing Ngapali Resort ကို လှမ်းမေးတာ သင်္ကြန်အခန်းတွေ ပြည့်သွားပြီတဲ့- ဆက်သိချင်လို့ စပ်စုလိုက်သေးတယ် – local or foreigner တွေနဲ့လား ဆိုတော့ local အများစုတဲ့- မြန်မာတွေ အခုလို ခရီးသွားရတာ နှစ်သက်လာတာကို အရမ်းကျေနပ်ပါတယ်–